Ogaden News Agency (ONA) – Wadahadalkii Trump & Kim oo Lasoo Gaba-Gabeeyey.
Wadahadalkii Trump & Kim oo Lasoo Gaba-Gabeeyey.
Posted by Dayr	/ February 28, 2019
Waxaa lasoo gaba-gabeeyey natiijo la’aan wadahadalkii u socday Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo shirkooda ka socday magaalada Hanoi ee caasimada dalka Vietnam.
Kulankii shalay ee labada hogaamiye ayaa ahaa mid qaatay saacado badan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isagu markii ugu horeysay taariikhdiisa ka jawaabay su’aal ay kusoo tuureen saxaafada goobta ku sugan.
Mid kamid ah suxufiyiinta ayaa su’aalo deg deg ah weydiiyey Kim Jong Un, xili saxaafada wakhti kooban loo ogolaaday inay galaan halka uu shirka ka socday. Kim oo ka jawaabaya su’aasha oo ahayd (Inuu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo hubkiisa Nukliyeerka?) ayaa ku jawaabay:
Qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayey ayaa ahaa;
1- Kuuriyada Waqooyi oo dooneysa in laga qaado cunaqabateynta
2- Maraykanka oo qaadista cunaqabateynta ku xiray in Kuuriyada Waqooyi marka hore burburiso hubkeeda nukliyeerka.
Maanta oo khamiis ah ayaa lasoo gabagabeeyey kulamada, waxaa sidoo kale la joojiyey xaflad heshiis saxiix ah oo horey loo qorsheeyey inay sameeyaan labada hogaamiye.
Donald Trump oo goor dhaweyd saxaafada la hadlay ayaa sheegay in heshiis aan lagu guuleysan balse ay caqabado ka dhasheen kala aragti duwanaasha ku aadan arrinta qaadista cunaqabateynta, wuxuuna sheegay inaysan ku guuleysan hada in ay meel isla dhigaan qodobo rasmi ah balse wadahadalka uu sii socon doono.